कोरोना महामारी फैलिँदै जादा भुटान कसरी छ सुरक्षित ? अहिलेसम्म १ जनाको मात्रै मृत्यु - साक्षी खबर कोरोना महामारी फैलिँदै जादा भुटान कसरी छ सुरक्षित ? अहिलेसम्म १ जनाको मात्रै मृत्यु - साक्षी खबर
२०७८ साउन १२, मंगलबार
कोरोना महामारी फैलिँदै जादा भुटान कसरी छ सुरक्षित ? अहिलेसम्म १ जनाको मात्रै मृत्यु
बैशाख २१, २०७८ | ३२९ पटक पढिएको
२१ गते, बैशाख,
कोरोना संक्रमण दर दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, नेपाल, पाकिस्तान लगायतमा बढिरहेकै बेला भारतसँगै सीमा जोडिएको भुटान भने ‘सेफजोन’मा देखिएको छ ।
भारतले दिएको कोरोना विरुद्धको ‘कोभिडसिल्ड’ नामक खोप लगाएर भुटान ढुक्क भएर बसिरहेको छ ।
भुटानमा सोमवारसम्म ९४ प्रतिशत नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् । महामारीको दोस्रो लहरले भारतलाई छोपिरहँदा भुटान भने शान्त छ ।
हालसम्म भुटानमा ९३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्यालाई भ्याक्सिनेट गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटमा बनेको अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन गत महिना हेलिकोप्टोरमार्फत भुटान पुर्‍याइएको थियो ।
भुटानको यो अवस्था देखेर अहिले विश्वका धेरै देश चकित छन् । भारतले दिएको कोरोना भ्याक्सिनबाट उसले यो सफलताको कथा लेखेको हो ।
भुटानमा सोमवारसम्मको रेकर्डअनुसार १ हजार ११९ संक्रमित र ९९९ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । कोरोनाबाट हालसम्म १ जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ ।
सार्क मुलुक पाकिस्तानमा दैनिक ४ हजारको संख्यामा संक्रमित थपिएका छन् । जहाँ ८ लाख ३४ हजार १४६ संक्रमित भइसकेको छन् । कोरोनाबाट मात्रै १८ हजार १४९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अफगानिस्तानमा हालसम्म ६० हजार २८८ संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये २ हजार ६४२ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । पछिल्लो समय अफगानस्तिानमा कोरोना संक्रमित हुने दरमा भने केही कमी आएको पाइन्छ ।
कोरोना महामारीबाट बढी प्रभावित अर्को मुलुक बंगलादेश हो । बंगलादेशमा हालसम्म ७ लाख ६३ हजार ६ सय ८२ संक्रमित भएका छन् । सोमवार मात्रै १ हजार ७३९ संक्रमित थपिएका छन् ।
६५ जना थप कोरोना संक्रमितको मृत्युसँगै बंगलादेशमा मृतक संख्या ११ हजार ६४४ पुगेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
अवैध १८ गोलिया काठसहित २ जना पक्राउ
पर्सेनीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
पाकिस्तानी अफ्रिदीले नेपालमा ईपीएल क्रिकेट खेल्ने
जसपा विवादः रेशम चौधरी तटस्थ बसे
दाङमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन स्थानीय सरकारको सिफारिस चाहिने
दाङमा करिब १० किलो चरेस बरामद, दुई पक्राउ
वृद्धवृद्धालाई दिवा केन्द्र, बालवालिकालाई फनपार्क
तुलसीपुरमा एकै दिन सिडिओका ६ कार्यक्रम
दाङमा ९ ग्राम ब्राउनसुगरसहित तीन जना पक्राउ